သတင်း Archives - SSIC
ရှမ်းပြည်နယ်၏သဘာဝ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
Category Archives: သတင်း
“Unboxing Investment Facilitation Toolkit 2022 ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (Myanmar Company Online – MyCO) အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း” အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
သတင်းBy Ye Naung Soe ဧပြီ 28, 2022
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ဦးဆောင်၍ “Unboxing Investment Facilitation Toolkit 2022 ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (Myanmar Company Online – MyCO) အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း” အခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက် နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းရုံး တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကို ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုန်သည်အသင်း လုပ်ငန်းရှင်များ စုစုပေါင်းဦးရေ (၅၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြြပီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးလေးနိုင်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးဝင်းနိုင် တို့မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။
Sapphire Gardens Kalaw Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
သတင်းBy Ye Naung Soe ဧပြီ 26, 2022
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် ၁၂၅၀/၂၀၁၇ ဖြင့် ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ရန် ခွင့်ပြုထားသော Sapphire Gardens Kalaw Co., Ltd. ကို (၂၆-၄-၂၀၂၂) ရက်နေ့ တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၂) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
သတင်းBy Ye Naung Soe ဧပြီ 21, 2022
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၂) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခမ်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း အဝေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာကျော်ထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဦးလေးနိုင်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ များညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Unboxing Investment Facilitation Toolkit 2022 ၏ အီလက်ထရောနစ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှု စနစ် (DICA Online Solution – DOSo) စနစ်၊ တစ်နေရာတည်း အလုံးစုံ…
Myanmar Allure Group Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
သတင်းBy Ye Naung Soe မတ် 24, 2022
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Myanmar Allure Group Co., Ltd. ၏ ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကို ၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
Myanmar Richy Regina Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Myanmar Richy Regina Co., Ltd. ၏ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အပန်းဖြေဟိုတယ် လုပ်ငန်း ကို ၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
Golden Triangle Paradise Resort Hotel သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Golden Triangle Paradise Resort Hotel ၏ ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်း စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း ကို ၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Thaw Tar Win Construction Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
သတင်းBy Ye Naung Soe မတ် 23, 2022
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Thaw Tar Win Construction Co., Ltd. ၏ ကျိုင်းတုံ – တာချီလိတ် ကားလမ်း အား ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ကို ၂၃-၃-၂၀၂၂ ရက်တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Adventure Myanmar Tours & Incentives Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
သတင်းBy Ye Naung Soe မတ် 22, 2022
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Adventure Myanmar Tours & Incentives Co., Ltd. ၏ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကျိုင်းတုံ ဟိုတယ်(သစ်) ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကို ၂၂-၃-၂၀၂၂ ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Sein Myint Mo Tours and Travels Company Limited သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Sein Myint Mo Tours and Travels Company Limited ၏ B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကို ၂၂-၃-၂၀၂၂ ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Swel Hein Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
သတင်းBy Ye Naung Soe မတ် 4, 2022
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့နယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် သစ်အခြေခံပရိဘောဂထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော Swel Hein Co., Ltd. ကို စီးပွားဖြစ်ကာလသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် (၄-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး သွား ရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
© SSIC - 2022. All rights reserved. Powered By DataFocus.